Bogga ugu weyn Waa maxay Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ee Jajabka ah oo ay shaqeysaa?
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajaban waa mawduuc aad u kulul suuqa guryeynta hadda. Waxa loo dallacaa si ay dadka caadiga ah u galaan ciyaarta hantida ma-guurtada ah oo ay lacag u helaan.
Laakin ka hor inta aanad iska bixin koofiyadda mulkiilaha yar yar oo aanad xidhin koofiyadda gurigaaga, waa in aad ogaataa waxa jira oo dhan oo ku saabsan maalgashiga hantida ma-guurtada ah ee jajaban. Waa inaad haysataa fikrad ugu yaraan waxa ay tahay maalgelinta hantida maguurtada ah ee jajaban iyo sida ay u shaqeyso.
Waa maxay Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ee Jajabka ah?
Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah ee Jajabka ahi waxay awood kuu siinaysaa inaad iibsato qayb ka mid ah hantida, si aad u hesho dhammaan faa'iidooyinka lahaanshaha hanti iyada oo aan la bixin kharashka hore iyo maamulkeeda.
Maalgelinta Guryaha Ma-guurtada ah ee Jajabka ahi waxay fursad weyn u tahay qof kasta inuu bilaabo ganacsi cusub isagoon iibsan dhammaan hantida. Waxay u ogolaataa qof haysta qadar yar oo lacag caddaan ah laakiin weli raba inuu maal gashado hantida ma-guurtada ah inuu sidaas sameeyo. Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo maro maalgashiga noocan ah, waxaana jira fursado badan oo laga heli karo suuqa maanta.
Aynu nidhaahno shirkadu waxay iibsataa qayb hanti ah oo ay aaminsan tahay in ay korayso qiimihiisu muddo ka dib. Kadibna waxay u qaybisaa kharashka hantida saamiyo. Saamiyadan ayaa markaa laga iibiyaa maalgashadayaasha. Maalgashadayaashu waxay dakhli ka helaan kirada guriga lagu soo dalaco waxayna sidoo kale heli karaan xisaab celinta hantida marka la iibiyo ama ay iibiyaan saamigooda.
Qiimaha saamiyadu waxa uu kor u kici doona marka qiimaha hantidu kordho. Maalgashadayaasha qaarkood waxay qaadan karaan doorka horumariyaha oo ay iyagu dhistaan ​​hantida iyaga oo ka ururinaya kirada maalgashadayaasha kale iyo mulkiilayaasha guryaha. Kuwo kale ayaa laga yaabaa inay iibsadaan guryo ay kuwa kale dhisteen oo ay bilaabaan helitaanka dakhliga kirada isla markiiba ka dib iibsashada.
Iyo qaar ka mid ah farsamooyinka maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajaban waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin iibinta saamigaaga wakhti kasta haddii aad doorato, u isticmaal dammaanad maalgashi ama deymo kale, iyo inaad si qurux badan u bixiso kiraynta saamigaaga.
6 Tallaabo Hagaha
Halkan waxaa ah 6 tillaabo tusaale wax ku ool ah oo ku saabsan sida ay u shaqeyso maalgelinta hantida maguurtada ah ee jajaban.
Isku qor madal maalgashi jajab ah sida CoVESTA ama BrickX.
Ka fiirso guryaha laga heli karo goobta.
Dooro hanti oo dooro qaddarka aad rabto inaad maalgashato.
Marka la doorto waxaad la socon kartaa waxqabadka saamiyada hantidaada.
Waxaad helaysaa qayb ka mid ah dakhliga kiraynta iyadoo lagu salaynayo inta hantida aad leedahay.
Waad haysan kartaa saamiyadaada ama waad iibin kartaa marka uu qiimaha gurigu kordho.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka Maalgelinta Guryaha Jajabka ah
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajaban waxay la timaaddaa faa'iidooyin badan iyo cillado. Markaa, waxa fiican inaad si taxadar leh u qiimeyso maalgashigan ka hor inta aanad quusin.
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajaban, kafaala-qaadaha ugu weyn wuxuu qabtaa dhammaan shaqada adag si uu u ilaaliyo ilaalinta hantida maalin kasta halka milkiilayaasha jajabku ay ururiyaan dakhliga dadban ee qaddarka u dhiganta saamiga lahaanshaha ee LLC. Maal-gashadayaasha hantida jajaban waxay helayaan dhammaan faa'iidooyinka lahaanshaha hantida, iyo iyada oo aan wax dhib ah lagu maamulin.
Caqabadaha Gelitaanka Ugu Yar
Uma baahnid inaad haysato boqol kun oo doolar si aad u bilawdo maalgelinta hantida maguurtada ah ee jajaban. Si ka duwan maalgelinta hantida maguurtada ah ee dhaqameed ee aad u baahan doonto laba boqol oo kun oo doolar si aad dhul u iibsatid oo aad u horumariso hal hanti iyadoo ku xidhan cabbirkeeda, waxaad ku bilaabi kartaa maalgelin wax yar oo dhan $10.
Oggolow kala duwanaansho fudud
Adiga oo kaliya iibsanaya qayb ka mid ah hantida ma-guurtada ah, waxaad si fudud u bedeli kartaa maalgashigaaga hanti dhowr ah, yaraynta fursadaha maalgashi liidata.
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajaban waxay ogolaataa wax ku biirinta dareeraha badan iyo dabacsanaanta. Goobaha qaarkood, maalgashadayaasha ayaa awooday inay ku iibiyaan saamigooda wakhti kasta (iyada oo loo marayo suuqyada sare). Si kastaba ha ahaatee, dabacsanaantani waxay ku xiran tahay qaabka iyo qaabka heshiiska ee ku xiran dhammaan maalgashiga.
Guud ahaan, maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajabku waxay ogolaataa hawlgal ka dabacsanaan badan maalgashiga hantida maguurtada ah ee dhaqameed ee qaybaha kala duwan. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku lug yeelato xirfadlayaasha; sidaa awgeed, waxay ku badbaadinaysaa walaaca laga badbaadi karo sida maamulka hantida iyo maaraynta kiraystaha. Sidoo kale, haysashada maalgashadayaasha badan waxay ogolaataa fikrado, fikrado, iyo wax ku biirin dheeraad ah.
Xakamaynta Guryaha oo Yar
Si ka duwan lahaanshaha soo jireenka ah ee hantida ma-guurtada ah, maalgelinta jajabku kuma siinayso guud ahaan xakamaynta arrimaha. Haddii aad maal gashato madal, shuruudaha xakamaynta waxaa badanaa lagu dejiyey shuruudo iyo shuruud kasta. Platform-yadu guud ahaan waxay si buuxda u maamulaan mashruuca, maalgashadayaashana waxa laga yaabaa inay wax ka sheegaan uun marka ay wax qaldamaan.
Inta badan, kafaala-qaadka maalgashi wuxuu u baahan doonaa shakhsiyaadka inay sameeyaan ballanqaad shan ama toban sano ah, muddadaas oo aysan awoodin inay iibiyaan xiisaha ay u qabaan heshiiska. Waqtigan xaadirka ah ayaa loo baahan yahay si si buuxda loo hirgeliyo qorshaha ganacsi ee hantida, laakiin waxaa laga yaabaa inay aad ugu badan tahay maalgashadayaasha qaarkood.
Waxaa laga yaabaa in suuqu hoos u dhaco
Waxqabadkii hore ma dammaanad qaadayso mustaqbalka. Heerarka kirada ayaa isbedeli kara, kiraystayaasha waxay ku dhici karaan lacag bixinta ijaarka, ama waxay ka bixi karaan gabi ahaanba. La shaqaynta kafaala-qaade khibrad leh oo leh rikoodh adag oo guuleed waxay caawisaa in la yareeyo khatarahaas, laakiin ma tirtirto.
Dhibaatada Fahamka Shuruudaha Heshiiska
Gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay maalgashiga guryaha ee jajaban. Haddii aad ku biirayso madal maalgashi oo jajab ah, fahamka shuruudaha oo aad ogolaato waxay kugu noqon kartaa dhibaato. Madal kastaa waxay leedahay shuruudo kala duwan, waxaadna rabtaa inaad ka taxadarto intii suurtagal ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad la xiriirto mulkiilaha hantida maguurtada ah ee ganacsiga.
Sababahan dartood, maalgeliyaha kastaa waa inuu ku dadaalaa inuu ku dadaalo dhismaha, madal iyo kafaala-qaadka ka hor inta uusan samayn raasamaal. Sababta aan uga hadli doono qaar ka mid ah meelaha ugu fiican ee aad ka fiirsan karto.
Platforms Waxaad isticmaali kartaa
Waxaa jira dhowr goobood oo aad ku maalgashan karto hantida maguurtada ah ee jajaban ee Maraykanka. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Roofstock waa madal online ah oo lagu maalgeliyo hanti ma-guurto ah oo dhan ama jajab ah. Marka ay aqbasho dalab, Roofstock wuxuu dalacayaa khidmad suuqa ah oo u dhiganta 0.5% qiimaha qandaraaska ama $500, hadba kan ka sarreeya. Xiritaanku wuxuu caadi ahaan qaataa ilaa 15 maalmood haddii aad lacag caddaan ah bixinayso iyo 30 maalmood haddii aad maalgeliso.
Ku dhawaad ​​​​ilaa 2013, RealtyMogul waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee deymaha isku-filka ah ee warshadaha guryaha ganacsiga ee Mareykanka. Waxa kale oo ay u shaqeysaa sidii hanti iyo maamule faylaleed ee heshiisyada goonida ah. Waxay siisay lacag caddaan ah oo qiimaheedu ka badan yahay $190M dib ugu celisay maalgashadeeda. Waxaad ku maalgashan kartaa goobtan wax yar oo dhan $5K.
Qofka isku dayaya inuu dhadhamiyo biyaha ama aan haysan maalgalin badan GroundFloor ayaa halkan kuu jooga. Maalgelinta ugu horreysa ee goobtan waxay noqon kartaa ilaa $10. Waxa ay ku guulaysatey in ay $4M ka ururiso ku dhawaad ​​laba kun oo maalgashadayaal. Qaab ganacsigoodu waxa uu ku shaqeeyaa muddo gaaban. In kasta oo ay tani kuu keeni karto soo-celin degdeg ah, waxay xaddidi kartaa faa'iidadaada faa'iidada wakhtiga yar awgeed.
Sida goob ay dadku isugu yimaadaan oo diiradda saaraya hantida ma-guurtada ah ee ganacsiga. Waxay siisaa fursad maalgashadayaasha inay maalgashadaan saamiyada jajabka ah ee guryaha ganacsi ee horay loo horumariyay, oo ay ku jiraan dhismayaasha xafiisyada, bakhaarada, iyo saldhigyada tareenada. Qofku wuxuu ku heli karaa saami hanti ah oo u hooseeya $250. Faa'iidada ugu muhiimsan ee goobtan ayaa ah in aad ku iibin karto saamiyo aan xadidnayn, iska ilaali wakhtiyada iyo sugitaanka horumarka dheer.
Ku dhawaad ​​​​ilaa markii la bilaabay 2014, CrowdStreet waxay kor u qaaday in ka badan $2B guud ahaan 500+ heshiisyo hanti ma-guurto ah oo ay siiso maalgaliyaasheeda tan iyo markaas. 2020 wuxuu caddeeyey inuu yahay sannadkii ugu guulaha badnaa shirkadda. Shakhsiyaadku waxay ku maalgeliyeen in ka badan $641M goobta, ku dhawaad ​​3x ka sarreeya kuwii 2018. Inta badan mashaariicda shakhsi ahaaneed iyo hantida ma-guurtada ah ee laga heli karo CrowdStreet waxay u baahan yihiin maalgelin ugu yar oo ah $25K.
Waa maxay midka ugu hooseeya ee maalgalin kara?
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajaban waxay ka bilaabataa wax u hooseeya $10 gudaha US, $CAD 50 Kanada, iyo ku dhawaad ​​£1000 gudaha UK. Lahaanshaha jajabka ah ee darajada A hantida waa hab fiican oo loogu talagalay maalgashiga saaxiibtinimo ee jeebka. Waxay kaa caawin kartaa kala duwanaanshaha ka baxsan isbeddelka suuqyada saamiyada iyo dulsaarka hoose ee dhigaalka go'an.
Sideen u maal gashadaa?
Samaynta maalgelinta hantida maguurtada ah ee jajaban waa mid aad u fudud. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad heshid madal ku habboon danahaaga, oo aad haysato xoogaa lacag ah oo diyaar u ah inaad maalgashato. Waxa laga yaabaa in aad saamiyo ka iibsatid guryaha hore u jiray, ama waxa laga yaabaa inaad maalgeliso wax cusub oo soo socda.
Haddii aad raacday ilaa hadda waxaad aragtay sababta maalgelinta hantida maguurtada ah ee jajaban ay u fududayso maalgashadayaasha badan inay galaan hanti ma-guurto ah. Waxa ay u ogolaataa maalgashadayaasha in ay wada jiidaan raasamaal oo ay iibsadaan hanti ma-guurto ah oo haddii kale aad qaali ugu ahaan lahayd qofka.
Maalgeliye kastaa wuxuu sameeyaa ballanqaad dhaqaale, dakhliga waxaa loo qaybsan doonaa si waafaqsan ballanqaad kasta.
Maalgelinta jajabku waxay la timaaddaa faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan dabacsanaan iyo dakhli dadban iyo magacyo dhowr ah. Waxa kale oo ay leedahay khasaare gaar ah, gaar ahaan xakamaynta xaddidan. Way fiicantahay in la sameeyo qiimayn dhamaystiran maalgashigan ka hor inta aanad wax ballan ah samayn.
10ka Apps ee Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah
Maalgelinta Muddada Gaaban ee ugu Fiicantdaqiiqad
Sida Afrika loo maalgashado 2022| Fikradaha ugu Wanaagsan ee Lagu Bilaabo
Goobtani waa goobaabin hantida, meesha ugu fiican ee aad ku baran karto sida lacag loo sameeyo, sida loo maalgaliyo,…
15 Siyaabaha Sharciga ah ee lagu bixiyo lacag si lacag loogu helo 2022 | Talada Khabiirka
Si caqli-gal iyo xikmad leh baa loo sheegay in aad lacag ku bixiso si aad lacag u hesho. Tan waxa loo yaqaan "maal-gashi." Waxa…
Maalgeliyaha caanka ah ee Warren Buffet ayaa yiri, "Weligaa ha maalgashan ganacsi aadan fahmi karin." Fahamka sida loo maalgashado…
10 Adeegyada Xulidda Lacag -La'aanta ugu Fiican 2022 -ka
Maalgashadayaasha saamiyada, boostadan adigaa leh! Waxaan helnay hab fudud oo aan ku baabi'in karno fikradaha jahawareerka leh ee ku saabsan…
Waa maxay Soo celinta Maalgelinta (ROI)?
Ku soo noqoshada maalgashiga (ROI) waa mitir maaliyadeed oo cabbiraysa soo celinta maalgashiga (tusaale ahaan, helitaanka…